कुरा काटेरै दिन काट्न नपरोस्, लोग्नेको कमाइ थाप्न नपरोस् !
‘ओहो ! हेर त त्यो केटीको पारा । छोरी मान्छे भएर नी कपाल छाटेकी छे, तिघ्रा देखिने गरी छोटो कट्टु लगाएकी । हेर्न नी लाज लाग्ने । हाम्रो गाउँघरमा रोपाइँ गर्न जाँदा लाउँथे यस्ता कट्टु त ।’ ‘यो पनि रोपाइँ गर्न जान आँटिछ क्यारे !’ ‘हा.हा.. के रोपाइँ गर्न हुन्थ्यो, जान लागी होला नी डेटिङ ।’
स्थानीय निकायको चुनावमा उठ्ने प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य रूपमा हुनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान संसदले ल्याएको छ । घर धन्दामा मात्र सिमित यस्ता महिलाहरुले कस्तो अवसर पाउलान त ? तिनिहरुको अवस्था कसरी सुध्रिएला ? यो एउटा बहसको विषय बनेको छ । अर्थात् दिनभर गन्थन मन्थन गर्दै बस्ने महिलाहरु राज्यले उपलब्ध गराएको सुविधा लिन कहिले तयार हुने ?
कसैले ‘ति कुरौटे महिलामै समस्या छ ।’ भनी टिप्पणी गर्छन् । तर ति महिला पनि यही समाजका उत्पादन हुन् । तिनीहरुको चिन्तन निर्माण हुनुमा हाम्रै पुरुषसत्तात्मक समाज जिम्मेवार छ । महिलाहरु खुलेर राजनीतिक, सामाजिक बिषयमा बहस गर्नुपर्नेमा, फराकिलो उद्धेश्य बनाउनुपर्नेमा भान्सामै बाँधिनुपर्ने भयो । त्यसैले पनि साना र महत्वहिन कुरामा दैनिकी काट्नु पर्ने बाध्यता बन्यो ।